Soomaaliya oo qorsheyneysa in saddex bil kaddib ay yeelato manhaj waxbarasho oo mideysan
Photo | Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya, Cabdiraxmaan Daahir oo ka hadlaya shirweynaha waxbarashada/Munasar Maxamed/Ergo
(ERGO) - Saddex bilood kaddib waxaa Soomaaliya laga hirgelin doonaa manhaj mideysan oo waxbarashada aasaasiga ah, kaas oo laga dhigi doono dhamaan dugsiyada aasaasiga ah ee hoose, dhexe iyo sare ee dalka. Manhajkan ayaa looga wadahadlay shirweynaha ansixinta qaab-dhismeedka manhajka waxbarashada qaranka Soomaaliyeed oo shalay oo Talaado ahayd ka dhacay Muqdisho.
Manhajkan oo laga shaqeynayay ilaa 2010 ayaa shirweynaha lagu soo bandhigay, lana tusay dhinacyada waxbarashada ee uu khuseeyo. Wuxuu dhigayaa in ardayga Soomaaliyeed uu waxbaran doono muddo 14 sano ah. Labo sano oo dugsi Quraanka iyo xannaanada ah, siddeed sano oo dugsiga hoose-dhexe ah iyo afar sano oo dugsiga sare ah.
Haddii uu dhaqangalo manhajkan waxay ka dhigan tahay in dugsiyada la dhigan doono lix maalmood oo ah Sabtida ilaa Khamiista. Dugsiga hoose-dhexe waxaa lagu dhigan doonaa toban maaddo oo aasi aasaasi ah oo ay ku jiraan cilmiga bulshada, farshaxanka, jir-dhiska iyo teknoolajiyada, halka dugsiga sarena lagu dhigan doono toban maaddo.
Waxay labada heer ka mideysan yihiin afafka Soomaaliga, Carabiga iyo Ingiriiska, iyo sidoo kale cashirro ka hadlaya waxbarashada nabadda, deegaanka, waddaniyadda, xuquuqda aadanaha iyadoo loo eegayo Islaamka, xallinta mushkiladaha, khataraha miinooyinka iyo walxaha qarxa.
“Manhajkaas wuxuu waajib ku noqon doonaa cid kasta oo la xiriirta waxbarashada,” ayuu yiri wasiirka waxbarashada, hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya, Cabdiraxmaan Daahir Cismaan oo la hadlay Raadiyo Ergo. Wuxuu intaa ku daray in imtixaannada sanadka soo socda la mideyn doono gobollada oo dhan, lagana yeelan doono qorshe adag si loo hubiyo inuu dhaqangalay manhajka.
Shirweynaha waxbarashada oo ay ka qeyb galeen wasiirrada waxbarashada ee maamul-goboleedyada Puntland, Koonfur-Galbeed, Jubbaland, Galmudug iyo Hirshabeelle, madaxda dalladaha waxbarashada, jaamacadaha, macallimiinta, culimada iyo ururrada bulshada rayidka ah ayaa la isku af-gartay in manhajka cusub uu noqdo mid la socda isbeddellada joogta ah ee teknoolajiyada, uuna ka tarjumo siyaasadda waddanka, diinta, dhaqanka, bulshada iyo horumarka.
Wasiirka oo ay wasaaraddiisa soo qaban-qaabisay shirka ayaa sheegay in dhibaatooyinka lagu qabo manaahijta aan mideysneyn ay ka mid yihiin in ay dadku kala dano, kala fikir iyo kala ujeeddo noqdaan. “Maanta shacab iyo dowlad waan kala ququbannahay, taasina waa miradhalkii manaahijta kala duwan ee 25-kii sano ee u dambeeyay dalka looga dhaqmayay,” ayuu yiri.
Wuxuu tilmaamay in dalladaha waxbarasho ee dalka ka jira ay oggolaadeen in lagu midoobo manhajka cusub oo meesha laga saaro kuwa kale oo dhan. Dalladahan waxay kaalin muuqata ka qaateen waxbarashada dalka intii lagu jiray burburka, laakiin toddobo manhaj oo kala duwan ayay isticmaalaan, kuwaas oo laga soo minguuriyay dalal ay ku jiraan Kenya, Sacuudi-Carabiya, Isu-tagga Imaaraadka Carabta iyo Hindiya, inkastoo iskuullada qaar ay ku adkeysteen inay sii dhigaan manhajkii dowladdii burburtay ee Soomaaliya.
Maxamed Xasan Diiriye oo ah guddoomiyaha dalladda waxbarashada SOFBEN ayaa Raadiyo Ergo u sheegay in uu aaminsan yahay in ay dowladdu awood buuxda u leedahay xilligan inay ku guuleysato mideynta imtixaannada iyaga oo hal manhaj ah, maaddaama uu shaqeeyo farac kasta oo waxbarasho heer maamul-goboleed, mid federaal iyo mid dalladeedba. “Waxaan diyaar u nahay inaan la shaqeyno dowladda, una hoggaansanno dhaqangelinta manhajkan,” ayuu yiri.
Dallad kasta waxaa ku mideysan dugsiyo isku manhaj ah oo ay isku mar imtixaanka ka qaaddo, hase yeeshee imtixaankii sanad-dugsiyeedkii u dambeeyay oo qabsoomay bishii May ee sanadkii 2016 waxaa si tijaabo ah u qaadday wasaaradda waxbarashada Soomaaliya.